မန်းဂေဇက်၏ရံပုံငွေ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » မန်းဂေဇက်၏ရံပုံငွေ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ
Posted by မောင်ရိုး on Jul 25, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 75 comments
ဂေဇက်ရွာ၏ ရံပုံငွေဘောလုံးပွဲကြီးကား စပေတော.မည် ။ယနေ့ နံနက် ဈေးသို.အသွားတွင် လမ်းဆုံလမ်းဂွ၌ မနောဖြူ၏ဒီဇိုင်းလက်ရာဖြင်. ကြော်ငြာဘုတ်ကိုတွေ့ ခဲ.ရသည် ။ မှန်းစမ်း …..ဘာပွဲများလဲ ……မောင်ဆာမိ ပြူးပြဲ၍ကြည်.သည်တွင် ……..အပြာရောင်ဝတ်စုံများဖြင်.ဟန်ရေးပြနေသည်ကား ပြာထွန်းဖြန့်  အသင်း …။ အ၀ါရောင်ဝတ်စုံများဖြင်. ခန့် ငြားနေသည်ကား …..သာထွန်းပြန့် အသင်း …….။ ဟုတ်ပြီ …မောင်ဆာမိဂျလေဘီရောင်းရတော.မည် ။ ဤသို.ဖြင်. …ဆာမိတစ်ယောက်အပျော်ကြီးပျော်လျက် ဘောပွဲ စမည်.ရက်ကို လက်ချိုး၍စောင်.နေတော.သည် ။
MG ရွာ၏ ရန်ပုံငွေဘောလုံးပွဲဖြစ်သောကြောင်. နှစ်ဘက်အသင်းသားတို.မှာ ရွာသူားများပင်ဖြစ်လေသည် ။ သာထွန်းပြန့် အသင်း၏ ပဲ.ကိုင်ရှင်နည်းပြချုပ်ကား ဦးနေးချား …..တိုက်ပွဲဝင်ဘောသမားများမှာ ရွာ၏ နာမည် ကျော် ဒိတ်ဒိတ်ကျဲများဖြစ်သည်. တိုက်စစ်မှုးကြောင်ကြီး ၊ ကြောင်လေး ၊ အောင်ပု ၊ မောင်ဂီ ၊ အံဇာတုံး ဂျစ်ပစီ ၊ မိုးတိမ် ၊ ဖိုးထောင် ၊ ရဲစည် ၊ အရင်.ရောင် ၊ ရွှေတိုက်စိုး ၊ မောင်ကမ်း ၊ အလင်းဆက် ၊ ကြောင်ဝတုတ် ငပ၊ွကြီး ၊ ဖရဲသီး ၊ ရာဇ၀င်လူဆိုး နှင်. ကိုရင်မောင် ……တို.ဖြစ်ကြလေသည် ။ ပြိုင်ဘက် ပြာထွန်းဖြန့် အသင်းမှ ကစားသမားများကားမည်သူတို.နည်း ………… နည်းပြချုပ် သည်ကား ယှင်နာရိရ ပင်ဖြစ်၍ ……..အသေခံကစားသမားများသည်ကား ……………….. ဥာဏကျော် ၊ လိုင်းယွန်းကင်း ၊ မောင်ဂွ ၊ မောင်မိုးပြာ ၊ မိုးချမ်းမြေ့  ၊ ကိုပါကြီး ၊ကိုငြိမ်းအေး ၊ ကိုအောက်အော. နှင်. ဇောက်ထိုး တို့ပင်ဖြစ်လေသည် ။ ပွဲကကြည်.ကောင်းမည် ။ တိုက်ရိုက်ထုပ်လွှင်.ရန်အစီစဉ်ရှိသည်မို. ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ.ခေါင်းဆောင် ကိုပေါက်မှာ ကင်မရာများ နေရာချရန်အတွက် စီစဉ်ရလေသည် ။ ကိုစိန်သော. ၊ ရွှေမင်းသား ၊ M လုလင် ၊ ရွှေထီး ၊ မှော်ဆရာ ၊ ပန်ချာပီဆြာအုပ် ၊ နှင်. ချစ်ရင်ထူး ၂ တို.ကလည်း ကင်မရာများနှင်.ဘောပွဲကိုရိုက်ရင်း ကောင်းနိုး ရာရာ လေးများမြင်လျှင် တယ်လီဇွန်းနှင်. ပြူးပြဲကြည်.ရန် စိတ်ကူးယဉ်နေတော.သည် ။ ဒိုင်လူကြီး ……ဒိုင်လူကြီး ……..မည်သူဖြစ်မည်နည်းဟု ကြည်.သော်………….. … ရွာသဂျီးဦးခိုင် ….။ ထိုဦးခိုင် သည် တကယ်တော.လည်း ဘောပွဲဖြစ်မြောက်ရေးစီစဉ်သူသာဖြစ်လေ၏ ။ ဘောပွဲကြေငြာ တင်ဆက်သူအဖြစ် ဗိုက်ကလေးနှင်. သာလိကာတို.မှ တာဝန်ယူမည် ။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကုသရန်အတွက် ရွာ၏ဆေးပညာရှင်များဖြစ်သော မပဒုမ္မာ ၊ မိုးသီတာစိုး ၊ AKKO ၊ ဆရာထက် နှင်. မောင်ဝိုင်းတို.ကလည်းကောင်း ……………အလောင်းသယ်ရန် …..အဲ ..ကန်တော. ကန်တော. မှားလို. ………………ဒဏ်ရာရသူများသယ်ဆောင်ထမ်းပိုးရန်အတွက် ကြက်ခြေနီတတ်ဖွဲ.၀င်များအဖြစ် လျှင်မြန်ဖြတ်လပ်လှစွာသော အဘဖော ၊ ကိုဘလက်ချော ၊ ကိုကြီးမိုက် နှင်. ဦးဦးပါလေယာတို.အား ရွေးချယ်ထားသည် ။
ယနေ့  ဘောပွဲ စတော.မည် ။ ဂျလေဘီထုပ်များနှင်.ရေသန့် ဘူးများဆွဲ၍ ပွဲကြည့် စင်ထက်သို.ကြိုပြီးရောက် နှင့်နေသည် ။ မကြာပါ …… စင်မြင့်၏ထိတ်ဆုံးတစ်နေရာသို. သားသားနားနားဝတ်စားထားသည့်  ဘောစိနှစ် ယောက် ရောက်လာခဲ.သည် ။ မောင်ဆာမိအချဉ်ဖမ်းရတော.မည် ……..ခတ်သွက်သွက်လေးသွား၍ ….. ဂျလေဘီဗန်းလေးထိုးပေးပြီး …………… “ဆရာဂျလေဘီ ….ဂျလေဘီဆရာ” ……………….ဟု အော်လိုက် သည်တွင် ……. “ ဘာကွ ……သေချင်လို.လား ” …………… “ငါ့ တို.ကိုများ ဂျလေဘီတဲ့ ………ဟင်း” မောင်ဆာမိပြေးထွက်လာမိသည် ………နောင်တွင်သိရသည်မှာ ထိုသူနှစ်ဦးသည် အမတ်မင်းနှင်. ကိုထူးဆန်း ဟူ၍…………..။သို.နှင်. …….ဘေးဘယ်ညာသို.ကြည့် သော် ဘောဒိုင်ကိုပေတစ်ယောက် ဖုန်းတစ်လုံးဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေသည်ကိုတွေ့ ရလေတော.သည် ။
…….ရွှီး ….ဟီးဟီးဟီး ………………….. ဟော…..ကြားရပြီ….။ ဒီုင်လူကြီးဦးခိုင် ၀ီစီမှုတ်လေပြီ ။ သြော် …..ပန်းစီးဆက်ကြဦးမည်ပေါ့ …… နှစ်ဘက် ဘောသမားများ ကွင်းလယ်တွင်နေရာယူထားကြလေပြီ ……..ထိုစဉ် ….ရွာထဲမှ အလှမယ်လေးများသည် အ၀ါရောင်အုပ်စု၊ အပြာရောင်အုပ်စု ဟု နှစ်စုခွဲ၍ ပန်းစည်းလေးများကိုင်ပြီး ကွင်းထဲဝင်သွားကြလေပြီ …..။ အ၀ါရောင်အုပ်စုတွင် ဆူး ၊ အိတုန် ၊ ပန်ပန် ၊ ရွှေအိ ၊ ရင်ငြိမ်းနွေး ၊ နိုဗွီ ၊ မိုးZ ၊ ပုခ်ျ ၊ နှင်. ခိုင်ခိုင် ….။ တစ်ဦးလျှင် သစ္စာပန်းခိုင် လေးတံကိုင်၍ ရွှင်ပြုံးသောအမူယာဖြင့် သာထွန်းပြန့်  အသင်းအား ပန်းဆက် လေသည် ။
အပြာရောင်အုပ်စုတွင်မူ မမအညာသူ ၊ မမနိုရာ ၊ စနိုးဝှိုက် ၊ ရွှေကြည် ၊ လင်းလင်း ၊ မိုက်ကလေး ၊ ကြည်ဆောင်း ၊ မွန်မွန် ၊နှင်. မေဖလားဝါး ……………………။သူတို.၏မျက်နှာကား မရွှင်မလန်း …။ နှာခေါင်းကိုရှုံ့  ….ခေါင်းကိုငုံ့ ပြီးလျှင် လက်ထဲမှ ပန်းကုံးအား ခတ်ခွာခွာကိုင်လျှက် …………..။ ဤသို.ဖြစ်လေသည် ။ အပြစ်တင်လိုပါက (၁၆)နှစ်သမီး မြီးကောင်ပေါက်ဖြစ်သော မမ အားဆိုရပေမည် ။ ပြာထွန်းဖြန့် အသင်းကိုဆက်မည့် ပန်းများကိုစီစဉ်ရန် မမ မှတာဝန်ယူထားသည် ၊။ ပွဲချိန်နီးသော် …. မူလစီစဉ်ထားသော ဒေလီယာ ပန်းများအစား ခွေးသေးပန်းများနှင့်မှား၍ ယူလာမိသောကြောင့် ပန်းကုံး များမှာခွေးသေးပန်းနံ့  တထောင်းထောင်းဖြင့် ….။ ပြာထွန်းဖြန့်အသင်းမှ သူများသည် သဘောထားကြီး စွာဖြင့်  ထိုခွေးသေးပန်းများကိုလက်ခံယူရလေတော.သည် ။
တစ်သင်းလျှင်ကိုးယောက်သာပါဝင်ကစားရသည်မို. ပထမ ကစားသမားများမှာ ရှေ့ တန်း – ကြောင်ကြီး ဖရဲသီး …..အလယ်တန်း – မောင်ဂီ ၊ ရဲစည် ၊နှင့် အံစာတုံး …..နောက်တန်းခံစစ်မှုးများအဖြစ် … ဂျစ်ပစီ ၊ ကြောင်ဝတုတ် နှင့်  မောင်ကမ်း ။ ဂိုး သမားအဖြစ် ရွှေတိုက်စိုးမှ တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်မည် ဖြစ်လေ သည် ။ ပွဲစသည်နှင့်  ပလေးမိတ်ကာမောင်ဂီ၏ အခင်းအကျင်းကြောင်. တဖက်အသင်းမှာ အလူးအလဲ ခုခံရလေသည် ။ တောင်ပံတိုက်စစ်သို့ မောင်ကမ်းနှင်. ဂျစ်ပစီတို့မှ လိုက်ပါပံ့ပိုးသဖြင့်  တဖက်နောက်တန်းမှာ ဆပ်ပြာသည်လင်ပျောက်သလို ဟိုပြေးဒီပြေးဖြင့် မနားရ ။ ပွဲစ၍ (၁၅) မိနစ် ခန့် အကြာတွင် လွတ်နေသော ကြောင်ကြီးထံသို. မောင်ဂီမှ ဖြတ်တင်ပေးလိုက်လျှင် ………. ကြောင်ကြီးမှ မြေမကျ ကန်သွင်းလိုက်ရာ ………. ညာဘက်ဂိုးတိုင်၏ အပ်ါထောင့် မှ လှလှပပ ဂိုးဝင်သွားခဲ.လေတော.သည် ……။
“ဂိုး …………………………………ဂိုး …………………………………………….ဂိုး……………” ပရိပ်သတ်၏ သြဘာသံသည် ဘ၀ဂ်သို့ တိုင် ထွင်းဖောက်လေပြီ ……….။ စိန်ဗိုက်ဗိုက်ကား ပျော် လွန်းသဖြင့် ၀တ်ထားသော ပုဆိုးကို ကမန်းကတန်းချွတ်ပြီးလျှင် လေထီးကဲ့ သို့  အသုံးပြု၍ ဘောပွဲကြေငြာရာစင်မြင့်ထက်ဆီမှ ခုန်ချလိုက်လေတော.သည် ။ ပွဲကြည့် ပရိပ်သပ်များမှာ မှင်တက်ငေးမောပြီးမည်သည့်  မည်သည်ကို ကြည့် ရမည်နည်း ………ဟူ၍…………………………………….။ သာထွန်းပြန့် အသင်းမှာပရိပ်သတ်များရှေ.တွင် အောင်ပွဲခံနေလေသည် .။ ထိုစဉ် …………….ပြာထွန်းဖြန့်  အသင်းမှကမန်းကတမ်း ကွင်းလယ်စည်းတွင်ဘောလုံးတည်၍ ဒိုင်သူကြီးမှ ပွဲကိုစတင်လေရာ ………. ဂိုး သမားမှတပါးတစ်ယောက်မျှမရှိသော သာထွန်းပြန့် အသင်း၏ ဂိုးပေါက်ထဲသို. ပြာထွန်းဖြန့် ၏ တိုက်စစ်မှုး ဇောက်ထိုးမှ ချေပဂိုးသွင်းယူသွားလေတော.သည် …….။
တစ်သင်းလုံး ကန့် ကွက်ကြသည် ….။ ပရိပ်သတ်များမှလည်းကန့် ကွက်ကြသည် …..။သို.သော် ………….. ဘောပွဲတို.၏ ထုံစံသည် ကွင်းလယ်ဒိုင်၏သဘောသာဖြစ်လေသဖြင့်  သာထွန်းပြန့်  အသင်းဂိုးပေးလိုက်ရ လေတော.သည် ။ ဂိုးသမားရွှေတိုက်စိုးမှာ မြေကြီးကိုကုန်း၍ု ကုန်း၍ ထိုးလေသည် (လက်သီးဖြင့်  ) ကြောင်ကြီးကား ……တခွီး ခွီးဖြင့် ဒေါသထွက်၏ ။ အောင်ပုမှာ ဆိုဖွယ်မရှိတော.ပြီ ။ ဤသို့ဖြင်. ပွဲစလေရာ ဖရဲမမှာ တဖက်အသင်းမှ မောင်ဂွနှင်.အတွေ. ……မည်ကဲ.သို. ဖြစ်သည်မသိ ၊ ခွေလဲ၍သွားလေတော.သည်။ ကိုဘလက်နှင်. ကိုကြီးမိုက်တို.သွားထမ်းလာခဲ.ရသည် ။ ဆေးကျောင်းသား မောင်သန်းထွဋ်မှာ ဖရဲမခြေ ထောက်ကျိုးသည်ကို မဆီမဆိုင် ရင်ဘတ်ကိုနားကျပ်ဖြင့် ထောက်သဖြင်. ရီရအခက် …..ငိုရအခက် ……။
ဖရဲမနေရာတွင် အလင်းဆက်ဝင်ကစားသည် ။ သွက်သည်…..ပြေးအားကောင်းသည် …..ထို့ကြောင်. …. တဖက်အသင်း၏ မျက်စိနောက်ခြင်းခံရသည် ။ မကြာပါ ……ဦးဦးပါလေရာနှင်. အဘဖောတို. ပြေးကောက် ရပြန်သည် ။ ကြောင်လေးကို ကြောင်ကြီးနှင်.တွဲပေးလိုက်သည် …….ပွဲမှာ ပို၍ကြမ်းလာလေသည် ။ သာထွန်းပြန့် အသင်းမှာ မကြခဏဆိုသလိုပင် ဖေါင်းဘောများပေးရလေသည် ။ အ၀ါကဒ်များလည်း မကြာခဏရလေသည် …….မောင်ကမ်းနှင်.ရဲစည် တို.အ၀ါကဒ်ထိသွားသဖြင့်  ကိုနေးချားမှာ အမြန်ပင် လူလဲဖို.ပြင်ဆင်ရလေတော.၏ ……..။
မောင်ကမ်းနေရာတွင် သံမဏိဗိုက်ဖိုးထောင်မှလည်းကောင်း ၊ ရဲစည်နေရာတွင် အရင်.ရောင် မှလည်းကောင်း လူစားဝင်ကြသည် . …..မကြာပါ …..ပြာထွန်းဖြန့် ၏ ကွင်းလယ်လူ မောင်မိုးပြာ ကန်တင်လိုက်သော ပြစ်ဒဏ် ဘောကို တိုက်စစ်မှုး ကိုအောက်အော့ မှခေါင်းဖြင်.တိုက်၍ ဦးဆောင်ဂိုးသွင်းလိုက်လေသည် ။ တကွင်းလုံးအသံ တိတ်သွားသည် ……။ ဒီုင်သူကြီးကား ကြိတ်၍ပျော်လေပြီ ။ လူမသိ သူမသိ ပြာထွန်းဖြန့်  အသင်းဖက်မှ တစ်ဦးတည်း လောင်းကြေးများဒိုင်ခံစားခဲ.သည်မို. ဒီညတော. ကိုဘေးနွားကြီးကင်စားရတော.မည်……… ဟု။ ဘောပွဲမှာတဖက်သပ် ဖြစ်လာသည် …..အ၀ါကဒ်များ တွင်တွင်ပြနေသဖြင့်  သာထွန်းပြန့် အသင်းမှာ ကစား၍မရတော. …….။ပွဲပြီးရန်ပင် နိးကပ်လာလေပြီ ။ ဂုရုကြီးဦးနေးချားမှာ သူ၏၀ှက်ဖဲဖြစ်လေသော အောင်ပုနားသို.သွား၍ ခတ်တိုးတိုး ပြောလိုက်လေရာ …………အောင်ပုမှာ လေ၏အလျှင်ကဲ.သို.ကွင်း ထဲပြေးဝင်၍ ကြောင်လေး၏နေရာတွင် လူစားဝင်လိုက်လေသည် ။ ပရိပ်သတ်များ ၊ ဘောပွဲတင်ဆက်သူများနှင့်  သာထွန်းပြန့်အသင်းမှာ ပျော်ရွှင်လွန်းသည်မှာ ဆိုဖွယ် မရှိတော့ ပြီ ….။ လက်ခုပ်သံတို့ပွက်ပွက်ညံသွားသည် …။
“အောင်ပု….. အောင်ပု ………အောင်ပု …” ဟူသော ကြွေးကြော်သံတို.မှာ စည်းချက်ကျကျ ထွက်ပေါ်လာခဲ.လေတော.သည် ။ ကွင်းထဲသို.ရောက်သည်နှင့်  အောင်ပုမှာ ဒိုင်လူကြီးအား ဘောလုံးဖြင့် တေ့၍ကန်သည် ။ ဒိုင်လူကြီး ဦးခိုင်မှာ သုံးကြီမ်မြောက် အကန်ခံရပြီးချိန်တွင် သဘောပေါက်သွားလေတော.သည် ……။ထိုအချိန်မှ စ၍ သာထွန်းပြန့်အသင်းကို အားပါးတရပြခဲ.သော အ၀ါကဒ်များကို အပြီးအပိုင်သိမ်းဆည်းလိုက်လေ တော.သတည်း…………..။(သာဓု …သာဓု ……သာဓု )
သာထွန်းပြန့် တို့ အလှည့် ရောက်လေပြီ ။ အခင်းအကျင်းကောင်းသော ပလေးမိတ်ကာမောင်ဂီနှင့်  အဖြတ်အတောက် အဖျက်ကောင်းသော အောင်ပုတို.၏ ကစားကွက်အောက်တွင် ပြာထွန်းဖြန့်  အသင်းမှာ လည်စင်း၍ခံနေရတော.သည် ။ ကောင်းလေစွ …..ပွဲမှာသာထွန်းပြန့်တို. အသာစီး ရနေသည် ။ ဂိုး ……………………………………….ဂိုး ………………………………………..ဂိုး ………………… ချေပဂိုးကို ကြောင်ကြီးမှသွင်းလိုက်ပါပြီ ။ အရင့် ရောင်မှထိုးပေးလိုက်သောဘောလုံးကို အောင်ပုမှ ခွကျော်ပေးလိုက်ရာ …..မတ်ကင်လွတ်နေသော ကြောင်ကြီးမှ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ကန်သွင်း သွားခြင်းဖြစ်ပေတော.သည် ။ နှစ်ဂိုးစီ သရေကျနေသည် ….။လောင်းကြေးမှာ ကြိုက်တဲ.ဘက်နေ ၊ သရေကျ ပြန်ခွာ ဖြစ်သဖြင့်  ဘယ်သူမှမရှုံးသေး ။ သို.သော် …….ပြာထွန်းဖြန့် တို့ အခြေအနေမကောင်း ……မကြာခင် နောက်တစ်ဂိုး အသွင်းခံရတော.မည် ။ ဒိုင်သူကြီးမှာ ဟိုဒီကြည့် ၍ ပွဲပြီးရန် (၅) မိနစ်ကျော်လိုသေးသော နာရီအား လှည့် လိုက်သည် ။ ပွဲမြန်မြန်ပြီးမှဖြစ်မည် …..မဟုတ်ရင် …လျော်ရမှာဖြင့်  ………………..။
ပွဲကား …..အထွဋ်အထိတ် သို.ရောက်နေလေပြီ …..။ ဂိုးဧရိယာထဲသို့ ဆွဲပြေးလာသော အောင်ပုကို မည်သူမျှမတားရဲ ……ဂိုးသမားနှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့ သည်တွင် လွတ်နေသော ကြောင်ကြီးထံသို. ပေးလိုက် ပြန်သည် …ကြောင်ကြီးကန်တော့ မည် ………..။ ဒိုင်လူကြီးမှာ ဘာတွေညာတွေ မစဉ်းစားအား …….. မျက်စိများပျာဝေလျက် တအားမှုတ်လိုက်လေတော.သည် ……………။ ရွှီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး အရှုံးအနိုင်မရှိ ။ တစ်ဘက်နှစ်ဂိုးစီသရေကျသည် ။ ဘောဒိုင်မောင်ပေမှာ မှင်ကုန် ၊ စာရွက်ဆုံး ၊ ဖုန်းဖိုးရှုံးလေပြီ
ဂိုး သွင်းခွင့် မရလိုက်သဖြင့်  အောင်ပုမှာ တောက် …..ဟူ၍ အံကြိတ်ပြီး….. အနိုင်ဂိုးမသွင်းလိုက်ရရှာသော ကြောင်ကြီးမှာ …….ခွီး ကနဲ ဒေါသထွက်လျက် …..
တောက် ……ခွီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ………………………………….။
အလိုတော် ညည်းကို ဘယ်သူဂ ကန်တတ်ဖူးရယ်လို့ ဖွလိုက်သလဲအေ့ …
သများက ကန်လဲကန်တတ်တယ် …
ရှေ့တန်းကနေ ၈ိုးလဲ သွင်းတတ်တယ် …
ဘောလဲကောက်တတ်တယ်ဟဲ့ … သိပလား …
အယ်. မဟုတ်တာတွေပြောရော့မယ် တခါမှမမြင်ဖူးဘူး ဒီအသက်အရွယ်ထိ။
…ဒဏ်ရာရသူများသယ်ဆောင်ထမ်းပိုးရန်အတွက် ကြက်ခြေနီတတ်ဖွဲ.၀င်များအဖြစ် လျှင်မြန်ဖြတ်လပ်လှစွာသော အဘဖော ၊ ကိုဘလက်ချော ၊ ကိုကြီးမိုက် နှင်. ဦးဦးပါလေယာတို.အား ရွေးချယ်ထားသည် ။..ဒွတ်ခ..ဒွတ်ခ..ဒွတ်ခ..
ကိုဆာမိအားကိုးတကြီးရွေးထားသူ ကိုဘလက်နှင့် ကြီးမိုက်မှာ သောက်ပီးမှောက်နေလေပြီ..
အဘဖေါကား သူ့မဟေသီ ဖုန်းနှင့် ကလော်တုတ်၍ လစ်သွားလေပြီ…
ဦးပါလေရာတစ်ယောက်သာ ယောင်ချာချာဖြင့် ထမ်းစင်ကိုင်လျှက်ငိုင်နေလေ၏..
ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အထူး သရုပ်ဆောင်ပေးကြသော သူကြီးဦးခိုင်နှင့်တကွ
ခင်မင်ရပါသောရွာသူရွာသားအပေါင်းကိုလည်းကောင်း ၊ ကွန်မန့်များဖြင့်  ချီးမြှင့်ပေးသော
အစ်မပဒုမ္မာ ၊ အရီးလတ် ၊ ဦးခိုင် ၊ မောင်ဂီ ၊ အဘဖော ၊ ကိုထူးဆန်း ၊ မိုး Z ၊ ဆူး ၊ ဒုတ်ထိုး
မွန်မွန် ၊ မနိုရာ ၊ ဘရားသား ၊ အမတ်မင်း ၊ မမအညာသူ ၊ ဦးဦးပါလေယာ ၊ ကိုဂျစ်ပစီ ၊ ပန်ပန်
ရို.စ်မင်း ၊ ရွှေကြည် ၊ ဦးကြောင် ၊ မိုးတိမ် ၊ ဒေါ်ပုခ်ျ ၊ ကိုပေ ၊ မအိတုန် ၊ ကိုကြီးပေါက် ၊ အရင့်ရောင်
မနိုဗွီ ၊ စီန်ဗိုက်ဗိုက် ၊ အံစာတုံး ၊ ခိုင်ခိုင် ၊ ကြည်ဆောင်း ၊ အန်တီမမ ၊ ရွှေအိ ၊ ရွှေတိုက်စိုး ၊ ညလေး
ကိုနိုဇိုမိ ၊ ကိုကြီးဘလက်ချော ၊ မေဖလားဝါး ၊ ကိုသန်းထွဋ်ဦး ၊ ကိုနေချား ၊ ကိုကြီး ကိုမိုက် တို.အား
အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် မအားလပ်သည့် ကြားမှ လာရောက်အားပေးဖတ်ရှုကြသဖြင့် 
အထူးပင် ၀မ်းမြောက်မိပါကြောင်း ……။
အသက်ကို ပြောင်းပြန်လုပ်ပေးလိုက်လို့လည်း ကျေးဇူးးးးးးးးးးးးးးးး
ရွာသူရွာသား စုံစုံလင်လင်တွေ့ရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်
ဒါနဲ့ ကိုဆာမိ စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ဆဲပဲလား ဟင်
ဟိုကောင်တွေ လာနှောင့်ယှက်သေးသလား ဟင်
ငါနဲ့နော် အသင်းထဲပါပြီး မကန်လိုက်ရတာ နာသကွာ…
ှနှင်းဆီငုံ ကိုရင်မောင် ကိုတေလေ ကျေးဇူးပါ
အန်တီမမကိုတော့ဓတ်ပုံထဲကအသက်အတိုင်း ထဲ့ ရေးလိုက်တာလေ ဟဲ ဟဲ
ကိုဆာမိကို မ၀ါ့တစ်ဝါဖြစ်တဲ့ လိမ္မော်ကဒ်ပြပါတယ်။ နောက်လုပ်မယ့်ပွဲတွေမှာ စည်းကြပ်ဒိုင်တွေထည့်ပေးပါ။
ဒါဘဲ။ ရထား…ရထား..။ ရထားဖြစ်ရင် ပြန်ပေါက်ပါ။ ဒါဘဲ။
ရထား ရထား လော်ကယ်ရထား အမြန်ရထား အသံကြားတယ်ဒါဘဲ
အမြန်ရထားတော့ မသိဘူး။ ကြံရထားတော့ထွက်သွားပြီ။ ဒါဘဲ။
သုံးငါး မလုပ်နဲ့တော့။ သာတီတူးရိုက်ဖို့ ထန်းခွဲလိုက်ပြီ။ ဒါဘဲ။
ကိုဖက်ကက်နဲ့ တွဲပြီး ကျော်တို့အသင်းကို
ကိုတိုက်က ဂိုလီဘာ ဒဲ့
ခြေသလုံး စမုတ်တံနဲ့ အကုန်လုံး
ဆရာမင်းလူ တို့ရဲ့ စာတွေကို
အမလေး ကောင်းလိုက်တဲ့ ဘောပွဲ…
နောက်ကျပြီးမှ မန့်ပေမဲ့ ဘရာကျော်ပါ… လက်မတစ်ချောင်းထောင်သွားပါဒယ်…
နောက်နောင် ကဗိုက်ကို ဒီ့ထက်အားရပါးရ အားပေးဘာလို့..
ဗိုက်ကလေးလိုလုပ်ချင်စိတ်ပေါက်သွားလို့မနဲထိန်းနေရတယ်ဗျိ်ု့ 
ဘောပွဲမှီလိ်ုက်ပါတယ်ဗျ နောက်မကျသေးပါဘူး ဟဲဟဲ
တလက်စထဲ ဖိတ်စာပါ ယူသွားပေးပါ။
ကိုဆာမိက လူရင်းဆိုတော့ ပွဲကို ဖိတ်စာမပါလည်းရောက်ခဲ့ပြီနော်။
ဖိတ်စာမပါလဲ လာပါ့ မယ်ဗျာစိတ်ချ
နောက်ပြီး အကျွေးအမွေးလေးလဲပါဦးမယ်ဆိုတော့ဟဲဟဲ
ရွာထဲကလူ​တွေ ​ပျောက်​တဲ့သူ​တွေက​ပျောက်​ ရှိတဲ့သူ​လေး​တွေကလည်း ၀င်​တစ်​ခါ ထွက်​နှစ်​ချက်​နဲ့ ပို့စ်​​ဟောင်း​လေး​တွေပြန်​ဖတ်​ရ​တော့လည်း ဘာဂလိုတိုတို လွမ်းသလိုလို​တော့ရှိသား